ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ (၈. ၅. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(က)-အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများနှင်‌့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှတ်တမ်း ဖိုင်တွဲများအား လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသော စနစ်မှ Digital စနစ်သို့ အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲပြုလုပ်ပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် လေးခန်းတွဲနှစ်ထပ် RC သွပ်မိုးအား ဌာနပိုင်မြေအတွင်း ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(ဂ)-တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်ရှိ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး၏ ဆေးကုသဆောင်များအား အမိုးလုံခြုံစေရန်နှင့် လူနာနားနေဆောင်များ၊ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေသော ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းများအား အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-သရက်မြို့နယ်အဆုံးရှိ ဆင်ကော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆင်ကော်ရဲစခန်းအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်နှင်‌့ ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းများကြောင့် အဆောက်အဦအသစ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-မိုင်းခတ်မြို့၊ မြို့မရဲစခန်း၏ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ရဲတပ်သားနှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ နေထိုင်နိုင်သော အဆောင်၊ အရာရှိမိသားစုနေထိုင်ရန် အဆောင်တို့အား မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-ပန်းတောင်းမြို့နယ်အနီးတဝိုက် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတွက် ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့အား ပန်းတောင်း မြို့နယ်အခြေစိုက်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားရှိရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ဖလမ်းမြို့နယ်၊ သီးဆဲင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဗားလုံ (ဝေဠုဝန်စခန်း) ‌ကျေးရွာတွင် ရဲကင်း သို့မဟုတ် ရဲစခန်း ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်